​मिडियाको आलोचनापछि सडकमै ओर्लिए मेयर
Tuesday,7Nov, 2017 12:40 PM
काठमाडौं, २१ कात्ति । काठमाडौं महानगरपालिकाले जनप्रतिनिधिको भावना अनुरुप काम गर्न नसकेको भन्दै विभिन्न खाले आलोचना भैरहेका बेला काठमाठौँ महानगरपालिकाले विकासका कामलाई तिव्रता दिन थालेको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य आफै विकास निर्माणका काममा सक्रिय हुन थालेपछि महानगरवासीले जनप्रतिनिधिको महशुस गर्न थालेका छन् । काममा बढी विश्वास गर्ने र चर्चामा कम आउने स्वभावका मेयर शाक्यले दशैँ–तिहार र छठलगत्तै विकासका काममा गति दिन थालेका हुन् । महानगरपालिकाले सडकको खाल्डो पुर्न र सडक पीच गर्न ५५ करोड विनियोजनगरेको छ । महानगरपालिकाले भित्री सहरका ४० वटासडक सुधार कामलाई तीव्रता दिने बताएको छ । यसपछि काठमाडौंमा खाल्डो, धुलोको समस्या न्यून हुने देखिन्छ । मिडियामा उनीप्रति भएको आलोचनाले उनलाई काममा घच्घच्याउन मद्दत पु¥याएको छ । कम बोल्ने स्वभावका कारण चुनावअघि उनी चर्चामा भए पनि चुनावपछि छायाँमा परे । यसो हुनेको प्रमुख कारण काठमाडौंको जनताले आशा उनीप्रति बढी हुनु थियो । जति जनताले उनीबाट आशा गरेका थिए, त्यो अनुसार उनले कामको गति अगाडि बढाउन नसक्दा उनी बढी आलोचित बन्नु प¥यो । काठमाडौंको अहिलेको समस्या भनेकै धुलो, धुँवा र फोहोर हो । यो कुरा दिनरात खटेर लाग्ने हो भने समाधान गर्न नसकिने विषय होइनन् । तर, मेयर शाक्यले सय दिनमा सामान्य काम पनि गरेर देखाउन सकेनन् । जसका कारण उनी आलोचित बन्नुप¥यो ।
मिडियाबाट बढी आलोचना हुन थालेपछि उनी विकास निर्माणका गतिविधि अवलोकन गर्न सडकमा निस्किन थालेका छन् । शनिबार नरदेवीमा भैरहेको सडक निर्माणको अवलोकनका लागि पुगेका शाक्यले स्थानीयसँग विकास निर्माणका बारेमा छलफल मात्र गरेनन् उनले अब दिनरात महानगरको विकासमा सक्रिय बन्ने प्रतिवद्धतासमेत व्यक्त गरे । यो व्यक्त गर्ने कुरा भन्दा पनि काम गरेर देखाउने बेला हो । जनप्रतिनिधिलाई आफ्नै घर–आँगनमा देखेपछि स्थानीयवासी समेत उत्साहित भएका थिए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मध्य वर्षातका बेला काठमाडौं उपत्यकाभित्रका खाल्डाखुल्डी देखेर आफू लज्जित भएको भन्दै १५ दिनभित्र काठमाडौंका सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्न मन्त्री र सचिवलाई निर्देशन दिएका थिए ।
मेयर शाक्यले भने वर्षाका बेला पूर्वाधार विकास गर्दा बजेटको मात्रै नास हुने भन्दै वर्षात सकिएपछि सडक निर्माणका काम थाल्नु पर्ने अडान लिएका थिए । तर कुरै नबुझी उनको विरोध भयो । वर्षा सकिएसँगसँगै अब सडक पिचको काम धमाधम सुरु हुँदैछ । ‘मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइपलाइन विस्तार र ढलको समस्याका कारण वर्षातका बेला काठमाडौं उपत्यकामा सर्वसाधारणहरूले ठूलो सास्ती खेप्दै आएका छन् । पानी परेका बेला सडकको बीचमा रहेका खाल्डा, हिलो र ढल व्यवस्थापन नहुँदा दुर्घटना बढी हुने गरेका छन्,’ मेयर शाक्यले भने, ‘वर्षातका बेला सडक निर्माण कार्य अघि बढाउनु भनेको बजेटको मात्र नास गर्नु हो । अब वर्षात सकियो । सडक निर्माणका कामले गति लिनेछन् ।’
उनले नरदेवी मात्र होइन महानगरभित्रका सम्पूर्ण सडक निर्माणको कामलाई महानगरले निरन्तरता दिने बताए । शाक्यले मेयर निर्वाचित भएर आएपछि निरन्तर महानगरको विकासमा आफू सक्रिय भएको भन्दै छिट्टै कामको परिणाम खोज्ने र आलोचनमा उत्रिहाल्ने सस्कारका कारण केही समस्या भएको पनि गुनासो गरे । उनले सञ्चार माध्ययमलाई छिट्टै आलोचना गरिहाल्ने भन्दा पनि केही समय धैर्य गर्न आग्रह गरे । ‘काममा केही ढिलासुस्ती अवश्य भएको छ,’ उनले भने, ‘तर, केही पनि काम नै भएको छैनन् भन्ने कुरा पनि सत्य होइन ।’
उनले केही कामहरु अघि बढाउन प्राविधिक रुपमा पनि समस्या भएको भन्दै विस्तारै हल गर्दै अघि बढने बताए । शाक्यले आफू निर्वाचित भएर आएपछि मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गर्ने, ८४ वर्ष पुगिसकेका वृद्धवृद्धालाई रु. १० हजार मा २ हजार थप गरी रु. १२ हजार बनाउने जस्ता कामको थालनी गरेको स्मरण समेत गराए । ‘भत्ता रकम सम्वन्धित व्यक्तिको बैंक खाता मार्फत सिधै पठाउने व्यवस्थाको शुरुवात भएको छ,’ उनले भने, ‘ग्रिन एण्ड क्लिन काठमाडौं अभियानको कार्य शुभारम्भ गर्ने, महानगरपालिकाको सम्पूर्ण कार्यलाई भ्रष्टाचारमुक्त र पारदर्शी बनाउन साइकल सिटी महानगरको कार्ययोजना प्रारम्भ गर्ने, ई गभरनेन्स प्रणाली शुरु गर्ने, सम्पूर्ण कार्यकक्षहरुमा सीसीटिभी जडान गर्ने जस्ता कार्य पनि अघि बढेका छन् ।’ तर, ती कामको प्रचार भने मिडियाले गरेका छैनन् ।
उनले ई गभरनेन्स प्रणाली शुरु गर्ने, सम्पूर्ण कार्यकक्षहरुमा सिसिटिभी जडान गर्ने, भुकम्पले नष्ट गरेको र असुरक्षित घरहरुको पुनर्निर्माणका लागि राज्यले व्यवस्था गरेको अनुदान र सहुलियत ऋण प्राप्तिका लागि सहजीकरण गर्ने, नदी किनारमा रहेका मठमन्दिरको संरक्षण सहितको बाग्मती, विष्णुमती, रुद्रमती संग्रहालय निर्माणको प्रक्रिया थालनी गर्ने जस्ता काम अघि बढेको पनि जानकारी दिए । तर, उनले महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुलाई हातमा लिन नसक्दा सुरुका दिनदेखि मेयर शाक्य आलोचित बने । उनीमाथि सानो गुट चलाएको र सिंगो महानगरपालिकाको काममा पार्टीले हस्तक्षेप गरेको आरोपसमेत लाग्यो ।
महानगरपालिकाभित्रका हरेक वडाको समस्या पहिचान गर्ने र ती समस्या समाधान गर्न त्यहीको वडाअध्यक्षको जिम्मा दिएर ढल, खानेपानी, सडक र फोहोर व्यवस्थापनको काम अगाडि बढाउनुपर्नेमा उनले आफ्नो पार्टीबाहेक अन्य पार्टीबाट विजयी भएका जनप्रतिनिधिलाई विश्वास गर्न नसक्दा आफँै समस्यामा परेको गुनासो जनप्रतिनिधिहरुको छ ।
सुशासनको जति गफ हाँके पनि मेयर शाक्य तिनै पुराना भ्रष्ट कर्मचारीको चंगुलमा परेका छन् । जो अगाडि आएर हजुर भन्दै चाकडी गर्छ त्यसैलाई विश्वास गरेका कारणले पनि अन्य कर्मचारी निराश भएका छन् को भ्रष्ट हो को असल कर्मचारी हो भन्ने कुरा उनले अहिलेसम्म छुट्याउन सकेका छैनन् । उनको निर्णय क्षमता कमजोर भएका कारण सिंगो पार्टी बदनाम भएको छ भने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसम्मले शाक्यका कारण आलोचनाको भारी बोक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
मेयरको निर्वाचनताका १०१ बुँदाको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेर १०१ दिनमै परिणाम दिने प्रतिबद्धता जनाएका शाक्यले तत्कालै गर्नुपर्ने र दीर्घकालीन योजनाको समेत ‘रोडम्याप’ बनाउ सकेका छैनन् । विकासका लागि मेयर आफैँले पहल गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन कुरा शाक्यबाट भएको पाइएको छैन । शाक्य मेयर बन्नु भन्दा अगाडि नै बागदरबार भत्काउने, मेयरका लागि नयाँ गाडी किन्ने र काठमाडौं बसपार्कमा आधुनिक भवन निर्माण गर्ने र सडकमा पीपीए मोडलमा सौर्य बत्ती जडान गर्ने निर्णय भएको भए पनि ती निर्णय कति ठीक कति बेठिक छुट्याउन नसक्दा हरिभवन बागदरबार विवादमा शाक्य फस्न पुगे । जबकि बागदरबार भत्काउने निर्णय तत्कालीन प्रमुख रुद्र तामाङले गरेका थिए भने उनी पछि आएका कार्यकारी प्रमुखले गाडी किन्ने निर्णय गरेका थिए ।
त्यसैगरी काठमाडौंमा मनोरेल सञ्चालनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन चिनियाँ कम्पनीले मेयरलाई हस्तान्तरण गरेको समाचार बाहिर आएको महिनौं बित्यो । तर, कार्यान्वयन गर्ने बेलामा मेयरकै कार्यकक्षबाट त्यो प्रतिवेदन ‘चोरी’ भयो । यहाँसम्मको लापरवाही महानगरपालिकाभित्र हुन्छ भने सडकमा निस्केर निरीक्षण गर्दैमा महानगरको विकास अगाडि बढ्न सक्दैन । अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ– ‘लिडर इज नट पोजिशन, इट इज एक्सन ।’